Egwuregwu na Eke - Egwuregwu sitere n'ike mmụọ nsọ
Egwuregwu na uri
Egwuregwu sitere n'ike mmụọ nsọ
E-akwụkwọ e bipụtara
Gbanwee sub menu
Ihe ọjọọ nke onye bi - Akụkọ ihe mere eme nke Darkside Egwuregwu na uri
Ngwa Egwuregwu na uri
Mgbugbu nke Rachel Foster Adventure
Mmalite Njikwa Star Egwuregwu na uri
Ndị Egwuregwu Ọbara Egwuregwu na uri
Nibiru - Onye ozi nke chi Egwuregwu na uri
Triangle Cobra Egwuregwu na uri
Na-alụ ọgụ na oghere ndị siri ike Egwuregwu na uri
Ụlọ ihe nkiri egwuregwu Varsav
Ihe na 15. Mee 2022 14. February 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Varsav Game Studios
Varsav Game Studios bụ ụlọ ọrụ tọrọ ntọala na 2016 yana ndị ọrụ 40. Ọ bụ ọkachamara n'ịkwalite egwuregwu site n'ụzọ dị iche - na-elekwasị anya na ọrụ igwe pụrụ iche na ndị isi ihe pụrụ iche. Emepụta izizi nke studio a, Bee Simulator, n'otu oge na Nọvemba 14, 2019 maka PC, PlayStation 4, Xbox One na Nintendo Switch…
GỤKWUO "Ụlọ ihe nkiri egwuregwu Varsav" »
Onye nrụpụta egwuregwu
Ihe na 15. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Memories Retold
Memories Retold debere akụkọ a na Agha Ụwa Mbụ, nke kwụsịrị na Nọvemba 11, 1918. Egwuregwu ahụ bụ arịrịọ maka udo. Ekwughachiri Ncheta Ndị agha ole na ole na-agbalị iji ụfọdụ egwu mee onwe ha obi ụtọ. Otu onye na-akụ ụbọ akwara, onye India nọ na ụlọ ọrụ ị zutere na-agba egwu. Ọ na-ada...
GỤKWUO "Echegharịrị ihe ncheta" »
Hard West 2: Mwepụta 2022
Ihe na 15. Mee 2022 15. Mee 2022 By Josefina Meloney	Enweghị asịsa ruo Hard West 2: Mwepụta 2022
Wild west zutere egwu. N'ime egwuregwu egwuregwu Hard West 2, ọtụtụ ihe egwuregwu na ndị mmegide na-echere gị, nke na-abụghị mmadụ mgbe niile. N'isiokwu a, anyị na-agwa gị ihe ị ga-atụ anya na nsonazụ. Ị na-ewere ọrụ nke onye ohi Gin Carter, onye ohi dị ize ndụ na ama ama. Mgbe Gin matara na ụgbọ oloko mmụọ na-ebu…
GỤKWUO "Hard West 2: Mwepụta 2022" »
Egwuregwu na uri, News
Giants ọgba aghara
Ihe na 14. Mee 2022 14. February 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Giants Uprising
Giants ọgba aghara na-ahapụ gị ka ị gbanarị n'agha dịka nnukwu. Varsav Game Studios weputara ihe ngosi nka. Imegwara ụmụ mmadụ ihe mgbaru ọsọ gị dị ka nnukwu bụ ịbọ ọbọ n'ahụ mmadụ. Ha gbara ndị dike ohu na dị ka nnukwu ị na-abọ ọbọ gị. Ị na-azọda, zọpịa ma tipịasịa ndị nta na-agba ọsọ. Ị na-ebibi...
GỤKWUO "Giant ọgba aghara" »
Wwa nke Akpọtụrụ
Ihe na 13. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa gaa na The Whispered World
GỤKWUO "Ụwa ahụ a na-asụ asụsụ" »
Ebiputara na 2019-04-26 14:19:04.
Ebugoro ntọala 4
Ihe na 13. Mee 2022 11. February 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa gaa n'ebe ndị ebukọrọ 4
Ntọala eburu 4 abụghị ihe ọzọ karịa mmejuputa mmejuputa nke akụkụ nke atọ. E bipụtara ya n'otu afọ nke akụkụ nke atọ. Egwuregwu ahụ bụ ebube okpueze maka egwuregwu ndị a na-ebugo n'egwuregwu ndị a tọhapụrụ maka NES ma na-eweta ọtụtụ nkwalite. Baseball nke anọ - Base nke ebugoro 4 ntọala 4 bụ…
GỤKWUO "Ebugoro ntọala 4" »
Na -arụ ọrụ na profaịlụ ebe nchekwa
Ihe na 13. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa iji na profaịlụ ebe nchekwa rụọ ọrụ
Profiler ebe nchekwa bụ ngwugwu ọhụrụ maka ịdị n'otu 2018.3 ma ọ bụ mgbe e mesịrị nke na-enye gị ohere inyocha ojiji ebe nchekwa ọrụ iji chọta ntapu ebe nchekwa na nkewa. Ntupu ebe nchekwa nwere ike ime mgbe ekenyela ebe nchekwa mana ewepụtaghị ya maka ijikwa ọzọ mgbe nchekwa adịghịzi mkpa. N'ime nkuzi a, ị ga-amụta ka...
GỤKWUO "Na-arụ ọrụ na profaịlụ ebe nchekwa" »
Nlaghachi ebighi ebi – nlanarị ojii
Ihe na 13. Mee 2022 13. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Nlaghachi ebighi ebi - Ịlanahụ ojii
Nlaghachi ebighi ebi: vlanahụ ojii bụ egwuregwu royale nke nwere mmetụta MOBA siri ike. Ọ na-ewuli elu egwuregwu gara aga anwụghị anwụ mkpụrụ obi: Black vlanahụ nke onye nrụpụta Nimble Neuron. Ndị Ọmụma Ochie na Nlaghachi Ebighebi Egwuregwu a na-eji otu mkpụrụedemede, ihe na ọnọdụ arụgharịrị maka mmetụta MOBA dị elu nke nwere ikike yana stats agbakwunyere. Ọ na-agbakwụnye ụdị duo na squad ...
GỤKWUO "Nlaghachi ebighi ebi - Ịlanahụ ojii" »
Ihe na 12. Mee 2022 13. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Epopeia Games
Egwuregwu Epopeia bụ ụlọ ọrụ egwuregwu Brazil nke na-eme egwuregwu kemgbe 2010. Otu egwuregwu ha bụ Mega Monster Party. Egwuregwu Epopeia Gaucho na Grassland Outland Rapture IIN Mega Monster Party Goroons Gaba na webụsaịtị onye nrụpụta.
Wallace na Gromit
Ihe na 12. Mee 2022 13. Mee 2022 By Claudia Wendt kwuru	Enweghị asịsa na Wallace na Gromit
Na post a, m na-enye nkọwa nke egwuregwu Wallace na Gromit. Wallace na Gromit Wallace na Gromit bụ ndị na-akwado usoro ihe nkiri Nick Park nke otu aha. O wepụtara ha na ụlọ ọrụ ya Aardman Animations. E si na Plasitlin chepụta ọnụ ọgụgụ ndị a na okpokolo agba na-atụgharị. Emere ihe ngosi ahụ site na iji usoro nkwụsị ngagharị nke a maara dị ka ụrọ. Wallace…
GỤKWUO "Wallace na Gromit" »
1 2 ... 155 esote
Ndị Ọrụ Taa: 14
Ndị ọrụ Yesnyaahụ: 107
Onyonyo niile: 56937
Kwadoro site na WPS Onye Nleta Ọbịa
Saịtị egwuregwu akwadoro (5)
Egwuregwu na uri (1.335)
Egwuregwu Board (4)
Egwuregwu furu efu (2)
kaadị Games (1)
egwuregwu egwu (1)
mgbaghoju anya (18)
ịme anwansị (20)
Akwụkwọ ọhụụ (4)
Ihe zoro ezo (4)
Onye nrụpụta egwuregwu (60)
Mmemme egwuregwu (97)
Emenyụọ ọrụ! Agakwaghị edekọ nleta gị na webụsaịtị a site na nyocha webụ. Biko mara na kuki nkwụsị nke Matomo nke webụsaịtị a ga-ehichapụkwa ma ọ bụrụ na i wepụ kuki ndị echekwara na ihe nchọgharị gị. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-eji kọmputa ma ọ bụ ihe nchọgharị weebụ dị iche, ị ga-achọ ịgafe usoro nwepu aha ọzọ.
Ị nwere nhọrọ nke igbochi omume ị na-eme ebe a ka enyocha ma jikọta ya. Nke a ga-echekwa nzuzo gị, mana ọ ga-egbochikwa onye nwe ya ịmụta ihe site na omume gị wee kwalite ojiji gị na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ihe nyocha Matomo na-edekọ nleta gị na webụsaịtị a ugbu a. Họrọ igbe nlele a ka ịpụ. Ọbịbịa gị na webụsaịtị a abụghị nke nyocha weebụsaịtị Matomo edekọghị ya ugbu a. Tinye igbe nrịbama nke a maka nbanye.
Ọrụ nwepu aha nke nsochi chọrọ kuki arụ ọrụ.
Ị na -achọ egwuregwu?
Action Adventure Capcom Daedalic Ntụrụndụ Daedalic Ogwe 13 Devcom afọ 2020 Egwuregwu furu efu Ụzọ Izere Gamescom 2019 Gamescom 2020 Gamescom 2021 GB GBA GBC Haemimont Games Egwuregwu Haiku Horror Ima elu & Gbaa Mgbasa ozi Kalypso Mega Man N64 NDS NES Nintendo ds Nintendo Gbanye PC PS1 PS2 PS3 PS4 PS5 PSP Na -adịghị ahụkebe Egwuregwu ịgba ọsọ RPG Sega shooter SNES azum mgba ọkụ Ịdị n'Otu Akwụkwọ ọhụụ Xbox Xbox One
TextMesh Pro 14 echiche
Kedu ihe bụ Sprite Renderer? 13 echiche
Ìhè na onyinyo 2D na ịdị n'otu 12 echiche
Ụlọ ihe nkiri egwuregwu Varsav 10 echiche
Ụlọ akwụkwọ Superheroes 9 echiche
Ọganihu ọgụ Ace 9 echiche
nnukwu anụ balloon 8 echiche
Hard West 2: Mwepụta 2022 8 echiche
Ụlọ ọrụ White Owls Inc. 8 echiche
Nzuzu 7 echiche
nwere ike 2022 (36)
Febụwarị 2022 (71)
nwere ike 2021 (48)
Febụwarị 2021 (82)
nwere ike 2020 (60)
Rockman na -arụ ọrụ zuru oke Egwuregwu na uri
Gamescom 2019 - nyocha Egwuregwu na uri
Mmekọrịta physics: Ndị na -akụkọta ihe na ndị na -akpalite ya Mmemme egwuregwu
Jack Keane Egwuregwu na uri
Ụmụ Morta RPG
Ndị agha Delta Egwuregwu na uri
Ihe ịma aka WWF Wrestlemania Egwuregwu na uri
Ihe karịrị egwuregwu 600 maka $10! - Mkpokọta maka Ukraine na itch News
Nwebiisinka © 2022 Egwuregwu na uri.
Kwadoro site na Isiokwu gbara ọchịchịrị Akụkọ PressBook
Ebe nrụọrụ weebụ a na -eji kuki iji melite ahụmịhe onye ọrụ. Ị nwere ike gbanyụọ kuki ndị a ebe a.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki iji mee ka ahụmịhe gị ka mma. Anyị ga-eche na ị dị mma na nke a, ma ị nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ntọala kukiNabata / nabata
Ntọala nzuzo na kuki
Ozi gbasara kuki / nchịkọta nzuzo
Webụsaịtị a na-eji kuki iji kwalite ọrụ yana ahụmịhe onye ọrụ. Enwere ụdị kuki abụọ: A na-echekwa ihe ndị dị mkpa na ihe nchọgharị ma dị mkpa maka ịrụ ọrụ ziri ezi nke weebụsaịtị. A na-eji kuki ndị na-adịghị mkpa ma ọ bụ ndị ọzọ eme ihe maka nyocha ma gosi anyị ojiji nke weebụsaịtị a. A na-echekwa kuki ndị a na ihe nchọgharị, mana naanị ma ọ bụrụ na ị kwenye ya ozugbo. Na ndị a, ị nwere nhọrọ nke machibido kuki ndị ọzọ a. Ịgbanyụ kuki ndị a nwere ike imetụta omume weebụsaịtị.
AWSALBCORS 7 ụbọchị Ndị ọrụ Weebụ Amazon na-elekọta kuki a, a na-ejikwa ya maka ịhazigharị ibu.
ahịa_id 10 afọ A na-eji kuki a maka ịnyefe ozi nyocha.
cookielawinfo-checkbox-mgbasa ozi 1 afọ Nke GDPR Kuki kwadoro ngwa mgbakwunye, kuki a na-eji edekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị dị na ngalaba "Mgbasa Ozi".
cookielawinfo-nyocha igbe 1 afọ Nke GDPR Kuki kwadoro ngwa mgbakwunye, a na-eji kuki a edekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị dị na ngalaba "Analytics" .
cookielawinfo-checkbox-arụ ọrụ 1 afọ Ngwa mgbakwunye GDPR Cookie Consent na-edozi kuki ka ịdekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị dị na ngalaba "Ọ na-arụ ọrụ".
cookielawinfo-checkbox-Mkpa 1 afọ Ngwa mgbakwunye GDPR kuki akwadoro, a na-eji kuki a edekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị dị na ngalaba "dị mkpa".
checkielawinfo-checkbox-abụghị nke dị mkpa 1 afọ Nke GDPR Kuki kwadoro ngwa mgbakwunye, a na-eji kuki a edekọ nkwenye onye ọrụ maka kuki ndị dị na ngalaba "adịghị mkpa".
cookielawinfo-igbe ndị ọzọ 1 afọ Nke GDPR Kuki kwadoro ngwa mgbakwunye, kuki a na-eji chekwaa nkwenye onye ọrụ maka kuki n'ụdị "Ndị ọzọ".
cookielawinfo-checkbox-arụmọrụ 1 afọ Nke GDPR Kuki Nkwenye ngwa mgbakwunye tọrọ, kuki a na-eji chekwaa nkwenye onye ọrụ maka kuki na udi "Arụmọrụ".
Nkwenye CookieLawInfo 1 afọ Dekọọ ọnọdụ bọtịnụ ndabara nke otu kwekọrọ na ọkwa CCPA. Ọ na-arụ ọrụ naanị na nhazi na kuki bụ isi.
ezEPCCCCS 1 afọ Ezoic na-edobe kuki a ka ọ soro mgbe onye ọrụ kwadoro kuki ọnụ ọgụgụ.
Kuki niile na-adịghị mkpa ozugbo maka webụsaịtị ka ọ rụọ ọrụ nke ọma ma ejiri ya na-anakọta data onye ọrụ site na nyocha, mgbasa ozi ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ agbakwunyere ka a na-akpọ kuki adịghị mkpa. Ọ dị mkpa ịnweta nkwenye nke onye ọrụ tupu enwee ike iji kuki ndị a. Ọ bụrụ na enyeghị nkwenye maka ojiji kuki, agaghị eji ya na naanị kuki ndị dị mkpa ga-arụ ọrụ.
__qca 1 afọ 26 ụbọchị Ejikọtara kuki __qca na Quantcast. Data a na-amaghị aha na-enyere anyị aka ịghọta mkpa ndị ọrụ nke ọma yana hazie webụsaịtị ahụ nke ọma.
euds nnọkọ Edobere kuki a site na mmanụ ọkụ Roket maka mgbasa ozi ezubere iche ka ndị ọrụ gosi mgbasa ozi dị mkpa.
i 10 afọ Emebere kuki a OpenX ka ọ dekọọ data onye ọrụ amaghị aha, dị ka adreesị IP, ọnọdụ mpaghara, webụsaịtị gara, mgbasa ozi onye ọrụ pịrị wdg, maka mgbasa ozi dị mkpa.
HERE 1 afọ 24 ụbọchị A na -eji kuki IDE Google DoubleClick IDE iji chekwaa ozi gbasara otu onye ọrụ si eji webụsaịtị ahụ gosi ha mgbasa ozi dị mkpa yana dabere na profaịlụ onye ọrụ.
mc Afọ 1 ọnwa 1 Quantserve na-edobe kuki mc ka ọ soro omume onye ọrụ na webụsaịtị na-amaghị aha.
rud 1 afọ 24 ụbọchị Kuki rud bụ nke Rocketfuel nwere ma na-edobe data onye ọrụ, dị ka adreesị IP, ọnọdụ, wdg. maka ebumnobi nke ịkwalite mgbasa ozi mgbasa ozi.
ruds nnọkọ Rocketfuel nwe kuki a ma na-anakọta data onye ọrụ na-amaghị aha iji lekwasị ndị na-ege ntị anya ma wepụta mgbasa ozi ahaziri iche.
nnwale_cookie 15 nkeji Doubleclick.net setịpụrụ test_cookie ma ejiri ya chọpụta ma ihe nchọgharị onye ọrụ ọ kwadoro kuki.
VISITOR_INFO1_LIVE Ọnwa 5 ọnwa iri na otu Kuki nke YouTube setịpụrụ iji tụọ bandwidth na -ekpebi ma onye ọrụ ọ ga -enweta ihe ọkpụkpọ ọhụrụ ma ọ bụ nke ochie.
YSC nnọkọ Youtube setịpụrụ kuki YSC ma ejiri ya soro echiche nke vidiyo agbakwunyere na ibe Youtube.
yt-remote-ejikọrọ-ngwaọrụ mgbe YouTube na-edobe kuki a ka ọ chekwaa mmasị vidiyo nke onye ọrụ site na iji vidiyo YouTube agbakwunyere.
yt-remote-ngwaọrụ-id mgbe YouTube na-edobe kuki a ka ọ chekwaa mmasị vidiyo nke onye ọrụ site na iji vidiyo YouTube agbakwunyere.
yt.innertube:: nextId mgbe Kuki a, nke YouTube setịpụrụ, na-edebanye aha ID pụrụ iche iji chekwaa data na vidiyo YouTube onye ọrụ hụrụ.
yt.innertube:: arịrịọ mgbe Kuki a, nke YouTube setịpụrụ, na-edebanye aha ID pụrụ iche iji chekwaa data na vidiyo YouTube onye ọrụ hụrụ.
A na-eji kuki arụ ọrụ mee ka ụfọdụ ọrụ dị ka ikesa ozi na nyiwe mgbasa ozi ọha, ịnakọta nzaghachi na ọrụ ndị ọzọ.
__cf_bm 30 nkeji A na-eji kuki a, nke Cloudflare setịpụrụ, iji kwado njikwa Bot Cloudflare.
pl_asụsụ 1 afọ Polylang na-eji kuki pll _language iji cheta asụsụ onye ọrụ họpụtara mgbe ọ na-alaghachi na webụsaịtị, yana nweta ozi asụsụ mgbe ọ na-adịghị n'ụzọ ọzọ.
A na-eji kuki nyocha arụmọrụ iji nyochaa ma ghọta akụkụ ndị bụ isi nke arụmọrụ. Nke a na-enyere aka na-aga n'ihu na-emeziwanye webụsaịtị ma si otú a na-enye ndị ọbịa ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
AWSLB 7 ụbọchị AWSALB bụ kuki na-eju ibu ngwa nke Amazon Web Services debere iji mapụta oge na ebumnuche.
ezits 7 afọ Onye na-eweta Ezoic na-edozi kuki ezds, a na-ejikwa ya maka ịchekwa nha pixel nke ihe nchọgharị onye ọrụ, iji hazie ahụmịhe onye ọrụ wee hụ na ọdịnaya dabara.
ezoab_1034 2 awa Ezoic na-eji kuki a kewaa iji nwalee njirimara na ọrụ dị iche iche.
ezi 7 afọ Onye na-eweta Ezoic na-edozi kuki ezohw, a na-ejikwa ya maka ịchekwa nha pixel nke ihe nchọgharị onye ọrụ, iji hazie ahụmịhe onye ọrụ wee hụ na ọdịnaya dabara.
Ogbolu 1 afọ Yandex na-edobe kuki a iji nakọta ozi gbasara omume onye ọrụ na webụsaịtị. A na-eji ozi a maka nyocha weebụsaịtị yana maka njikarịcha weebụsaịtị.
yuidss 1 afọ Yandex na-echekwa kuki a na ihe nchọgharị onye ọrụ iji mata onye ọbịa ahụ.
A na-eji kuki nyocha iji ghọta ka ndị ọbịa si emekọrịta na webụsaịtị a. Kuki ndị a na-enyere aka inweta ozi gbasara ọnụọgụ ndị ọbịa, ọnụego bounce (ọnụọgụ ndị ọbịa na-eleta weebụsaịtị wee hapụ ya ozugbo), obodo onye ọbịa, wdg.
__agha 1 afọ 24 ụbọchị A na-echekwa kuki kuki __gads, nke Google debere, n'okpuru ngalaba DoubleClick wee soro ọnụ ọgụgụ oge ndị ọrụ hụrụ mgbasa ozi, tụọ ọganiihu nke mkpọsa ahụ wee gbakọọ ego ọ ga-enweta. Enwere ike ịgụ kuki a naanị site na ngalaba edobere ha na agaghị eso data ọ bụla mgbe ị na-eme nchọgharị na saịtị ndị ọzọ.
_gu 1 ọnwa Onye na-eweta Getsitecontrol ahazi kuki a. A na-eji kuki a mata ndị ọrụ.
_ym_d 1 afọ Yandex na-edobe kuki a iji chekwaa ụbọchị ndị ọrụ nnọkọ saịtị mbụ.
_ym_isad 20 awa Yandex na-edozi kuki a ka ọ mara ma onye ọbịa nwere ihe mgbochi mgbasa ozi.
_ym_uid 1 afọ Yandex na-edozi kuki a iji chọpụta ndị ọrụ saịtị.
Nkwupụta 2 afọ YouTube na-edobe kuki a site na vidiyo YouTube agbakwunyere ma debanye aha data ndekọ aha na-amaghị.
eu 1 afọ 24 ụbọchị Rocketfuel nwe kuki a ma na-anakọta data onye ọrụ na-amaghị aha iji lekwasị ndị na-ege ntị anya ma wepụta mgbasa ozi ahaziri iche.
ezepv 1 ụbọchị Onye na-eweta Ezoic edobere kuki a ka ọ soro ibe ibe onye ọrụ lere.
ezoadgid_1034 30 nkeji Ezoic na-eji kuki a edekọ id maka afọ onye ọrụ na ụdị okike.
ezoref_1034 2 awa Ezoic na-eji kuki a echekwa ngalaba na-ezo aka, ya bụ webụsaịtị onye ọrụ nọ na ya, tupu ọ bata na webụsaịtị dị ugbu a.
ezoupva nnọkọ Onye na-eweta Ezoic na-edozi kuki ezouspva ma a na-eji ya nyochaa ọnụọgụ ibe nke onye ọrụ gara mgbe niile.
Ezigbopvv nnọkọ Onye na-eweta Ezoic na-edozi kuki ezouspvv ma a na-eji ya nyochaa ọnụọgụ ibe nke onye ọrụ gara mgbe niile.
Onye ọrụ ID1 3 ọnwa Edobere kuki a site na ADITION Technologies AG, dị ka NJ pụrụ iche na nke amaghị aha maka onye ọbịa webụsaịtị, iji chọpụta ndị ọrụ pụrụ iche n'ofe ọtụtụ oge.
yab-sid nnọkọ Yandex na-edozi kuki a ka ọ chekwaa NJ nnọkọ.
yandexud 1 afọ Yandex na-edozi kuki a iji chọpụta ndị ọrụ saịtị.
A na-eji kuki mgbasa ozi iji gosi ndị ọbịa mgbasa ozi na mgbasa ozi dị mkpa. Kuki ndị a na-eso ndị ọbịa ka ha na-aga na webụsaịtị ma na-anakọta ozi na-enye ha ohere ijere mgbasa ozi ahaziri ahazi.
Kuki ndị ọzọ na-edochaghị anya gụnyere ndị enyochala mana ekenyebeghị otu ụdị.
_auid 1 afọ Enweghị nkọwa dị.
arụ ọrụ_ụdị :: 332619 2 ụbọchị
hapụ nnọkọ Enweghị nkọwa dị.
BACKENDID nnọkọ Enweghị nkọwa dị.
dspid 1 afọ Enweghị nkọwa dị.
ezoab_332619 2 awa Enweghị nkọwa
ezoadgid_332619 30 nkeji Enweghị nkọwa
ezopvc_332619 30 nkeji Enweghị nkọwa
ezoref_332619 2 awa Enweghị nkọwa
ezosuibasgeneris-1 1 afọ Enweghị nkọwa
ezovid_332619 30 nkeji Enweghị nkọwa
ezovuuid_332619 30 nkeji Enweghị nkọwa
ezovuuidtime_332619 2 ụbọchị Enweghị nkọwa
ezux_lpl_332619 1 afọ Enweghị nkọwa
F_001 3 ọnwa Enweghị nkọwa
g_001 1 ụbọchị Enweghị nkọwa
gt_auto_switch 1 ọnwa Enweghị nkọwa dị.
lp_332619 30 nkeji Enweghị nkọwa
mts_id Afọ 9 ọnwa 10 ọnwa 8 Enweghị nkọwa dị.
mts_id_last_sync Afọ 9 ọnwa 10 ọnwa 8 Enweghị nkọwa dị.
pvc_leta 1 afọ Emebere kuki a site na nlegharị anya nlegharị anya. A na-eji kuki a agụọ ọnụọgụ nleta na post. Ọ na-enye aka n'igbochi nleba anya nzigharị nke onye ọbịa.
srp nnọkọ Enweghị nkọwa dị.
Njirimara Onye Ọrụ Ọnwa 5 ọnwa iri na otu Enweghị nkọwa
Kuki dị mkpa dị mkpa maka weebụsaịtị ka ọ rụọ ọrụ nke ọma. Otu a nwere kuki nke na -eme ka ọrụ webụsaịtị rụọ ọrụ nke ọma. Kuki ndị a anaghị echekwa data nkeonwe ọ bụla.